10 Aragtida Ugu Quruxda Badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Aragtida Ugu Quruxda Badan Yurub
Dooxooyinka cagaaran ee qurxoon, daaraheeda waaweyn, iyo tuulooyin qurux badan, Yurub ayaa leh meelo badan oo yaab leh si ay u booqdaan. Meel kasta iyo meel kasta waxay kaa dhigeysaa inaad dareento inaad walaalo ku soo dhex baxday’ Sheekooyinka Grimm, iyo 10 aragtiyada ugu quruxda badan Yurub waa goobta ugu habboon ee sheeko xariirooyinka.
1. Muuqaalka Ugu Quruxda Badan Faransiiska: Dooxada Dordogne
Buuro cagaaran oo cagaar ah, webiga cajiibka ah ee Dordogne, iyo 5 tuulooyin la yaab leh oo helay “tuulada ugu quruxda badan Faransiiska” abaalmarinta ka dhig dooxada Dordogne mid ka mid ah aragtida quruxda badan ee Yurub. Castelnaud waa mid ka mid ah qalcadaha ugu soo jiidashada badan Faransiiska, oo ku taal aagga tuulada Perigord madow. Tuulooyinka ku yaal dooxada Dordogne wali lama taabtaan waqtiga, iyo intaad dhex mushaaxayso jidadka iyo jidadka, waxaad dareemi doontaa inaad dib ugu soo safartay waqtigii Knights iyo halyeeyada waqtiga.
Aragtida ugu quruxda badan ee Faransiiska waa la heli karo tareen. Waad ku tababaran kartaa safarka Bordeaux wax ka yar 2 saacadood, ama ka yimid Paris wax ka yar 6 saacadood. Gobolkan soo jiidashada leh ayaa gebi ahaanba ka qiimo badan safarka maalinlaha ah.
Nantes ilaa Qiimaha Tareenka Bordeaux
Paris ilaa Qiimaha Tareenka Bordeaux
Lyon ilaa Bordeaux Qiimaha Tareenka
Marseilles ilaa Qiimaha Tareenka Bordeaux
2. Vernazza, Cinque Terre Socodka Socodka
Aragtida tuulada quruxda badan ee Vernazza ee Cinque Terre waa mid ka mid ah 10 aragtida ugu quruxda badan Yurub. Tuuladan midabada leh ayaa ka mid ah 5 tuulooyin qurux badan, oo ka kooban gobolka cajiibka ah ee Cinque Terre. Guryaha quruxda badan ee ku yaal asalka badda buluugga ah ee buluugga ah, abuur sawir muuqaal u eg, gaar ahaan cajiibka qorrax dhaca.
Waad ku bogi kartaa aragtidan quruxda badan Cinque Terre raad tug aragti isku xidha dhammaan 5 tuulooyinka. Markaad kor u qaaddo raadadka, waxaad arki doontaa beero canab ah, doonyaha kalluumeysiga, iyo Cinque Terre bilicdeeda oo dhan. Way fiican tahay booqo Cinque Terre guga iyo deyrta tan iyo xagaaga cimilada waxay u noqotaa mid qoyan socodka, iyo xilliga qaboobaha raadku wuu xirmi karaa.
Qiimaha Tareenka ee Corniglia ilaa Vernazza
Florence ilaa Vernazza Qiimaha Tareenka
Qiimaha Tareenka Bologna ilaa Vernazza
Riomaggiore ilaa Qiimaha Tareenka Vernazza
3. Muuqaalka Muuqaalka Ugu Badan Iswiiska: Rochers De Naye
Aragtida Switzerland waxay dhiirrigelisay filimaan iyo farshaxanno badan, iyo markaad booqato Rochers De Naye iyo gobolka Vaud, waad fahmi doontaa sababta. In kasta oo inta badan socotadu fuulaan buuraha Malatraix, dhab ahaantii waxaa jira aragti ka sii naxdin badan oo ka socota Rocher-De-Naye.
Markaad halkaas kor joogto waxaad fiirin doontaa harada Geneva iyo meelaha barafka leh ee buuraha Switzerland xagga dambe. Muuqaalkan quruxda badan ee ku yaal Rocher-De-Naye wuxuu ku habboon yahay qorrax dhaca ama jimicsiga haddii aad xiisaynayso socodka aroorta hore.
Gagada Diyaaradaha Lyon ilaa Qiimaha Tareenka ee Geneva
Qiimaha Tareenka ee Zurich ilaa Geneva
Qiimaha Tareenka Paris ilaa Geneva
Qiimaha Lucerne ilaa Geneva
4. Gobolka Mullerthal
Gobolka Mullerthal wuxuu leeyahay aragtiyada ugu xiisaha badan Luxembourg. Qaababka dhagxaanta, biyo-dhacyo, iyo wadiiqooyin cagaaran oo laga kala xusho, waa janno socod. Mullerthal waxaa badanaa loo yaqaan Little Switzerland, mahadsanid muuqaalkeeda cajiibka ah.
Aragtida ugu quruxda badan ee Luxembourg waa Wabiga Sure ee baarkinka dabiiciga ah ee Sare-Sure. Waad ku raaxeysan kartaa meeshan quruxda badan adiga oo kor u kacaya Wadada Wadada Mullerthal 1. Wadadan socodka ah waxay qaadataa seeraha cagaaran, Qasriga Tudor, ka dhigaysa mid ka mid ah 10 aragtida ugu quruxda badan Yurub.
5. Muuqaalka Ugu Quruxda Badan Czech Republic: Moravian Tuscany
Meelaha rooga cagaaran ee silig u eg, gobolka Moravia ee Czech Republic ayaa soo jiidasho leh. Cagaar xagaaga, ubaxu, iyo midabo guga, midabada Moravian Tuscany waxay isbeddelaan xilliyada sanadka. Sidaas, wakhti kasta oo aad u safarto Moravia, waxaad heli doontaa aragtiyo gebi ahaanba ka duwan mataanaha Tuscany.
Muuqaalkan cajiibka ah ee Yurub waa safar maalinle ah oo ka yimaada Prague. Tuulooyinka dabiiciga ah ee Sardice, iyo Karlin iyo Morave, soo bandhig aragtida ugu fiican ee meelaha Moravia.
Guryo alwaax ah oo alwaax ah oo ku yaal asalka buuraha barafku ka buuxo, Tuulada Alpbach waa qurux. Tuulada yar ee quruxda badan ee Alpbach waxay ku taalaa mid ka mid ah gobolada ugu caansan Austria: Tirol. Biyo-dhacyo la yaab leh, Wadooyinka loo maro tamashleyaasha qibrada leh ama qoysaska carruurta leh, waxaa jira siyaabo fara badan oo lagu sahamin karo muuqaalka Austria iyo dabeecadda.
Intaa waxaa dheer, waxaad quusin kartaa harooyinka diiran ee Austria, kuwaas oo sidoo kale laga helo meel u dhow tuuladan qurxoon. Muuqaalka ugu quruxda badan ee Alpbach ee Austria waa mid gaaban tareen kortaan ka fog garoonka diyaaradaha.
Qiimaha Tareenka ee Vienna ilaa Landeck Ischgl
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Munich ilaa Landeck Ischgl
Qiimaha Tareenka Salzburg ilaa Landeck Ischgl
Qiimaha Tareenka ee Zurich ilaa Landeck Ischgl
7. Muuqaalka Ugu Quruxda Badan Jarmalka: Neuschwanstein Castle
Liiska aragtiyada Yurub ee ugu xaragada badan ma dhameystirmi doono iyada oo aan la arkin qalcaddii. Qasriga Neuschwanstein ee Jarmalka waa qalcadihii ugu cajiibka badnaa gudaha Jarmalka waxayna bixisaa mid ka mid ah aragtiyaha ugu caansan Yurub.
Aragtida ugu caansan ee Neuschwanstein Castle waxay ka timid buundada Mary. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqoneysaa mid ciriiri badan oo aan macquul aheyn in sawir laga soo qaado aragtida caanka ah. Sidaa darteed, waa inaad sii fuulaysaa buur oo la soo dhaafay aragtida Marienbrucke. Aragtida ugu quruxda badan ee Jarmalka waa waddo zig-zag, ka yimid madal deyr leh.
Qiimaha Tareenka ee Dusseldorf ilaa Munich
Qiimaha Tareenka ee Dresden ilaa Munich
Nuremberg ilaa Qiimaha Tareenka ee Munich
Qiimaha Bonn ilaa Munich
8. Netherlands ayaa, Tuulada Zaanstad
Holland waxay caan ku tahay tulips iyo dabaysha, kanaalada, iyo magaalooyin qurux badan. Sidaa darteed, Maaha wax lala yaabo in mid ka mid ah aragtiyada ugu quruxda badan Nederland ay labaduba yeeshaan. Hadaad nasiib u yeelato inaad safarto guga, waa inaad booqataa tuulada Zaanstad. Halkan waxaad ka heli doontaa dabayl firfircoon oo leh tulips ubaxyo leh dhammaan midabada qaansoroobaad.
Bremen ilaa Qiimaha Tareenka Amsterdam
Hannover ilaa Qiimaha Tareenka Amsterdam
Bielefeld ilaa Qiimaha Tareenka Amsterdam
Qiimaha Hamburg ilaa Amsterdam
9. Muuqaalka Ugu Quruxda Badan Dalka Hungary: Gellertberg Hill In Budapest
Aragtida baarlamaanka Hangari waa mid ka mid ah sawirada ugu caansan Budapest. Waxaad ka dhejin kartaa muuqaalkan xiisaha leh Gellertberg Hill. at 235 m, waxaad awoodi doontaa inaad aragto Wabiga Danube iyo aragti indho sarcaad leh oo ku saabsan Budapest.
Midabada midabada qorrax dhaca, nalalka habeenkii, ama maalin cirka oo buluug cad ah, aragtiyadu waa yaab. Sayidka, Aragtida Gellertberg Hill ayaa ka dhigtay kaayaga 10 aragtida ugu quruxda badan Yurub.
10. Chateau De Crevecoeur Oo Cunto Ah
Tuulada quruxda badan ee 'Dinant' waa mid ka mid ah tuulooyinka ugu quruxda badan uguna wanaagsan Yurub. Muuqaalka ugu quruxda badan ee Cunnada, kaniisadda, webiga, iyo dooxada Meuse waxay ka timaadaa Chateau de Crevecoeur, Qasriga wadnaha.
Ka talinta muuqaalka dhagaxa nuuradda, qalcaddan cajiibka ah waxay iska indhatireysaa Diinta ilaa qarnigii 13aad.
Qiimaha Qiimaha Tareenka ee Brussels
The 10 aragtida ugu quruxda badan Yurub waa kor buuro cagaaran, halkaas oo kaliya kuwa riyooda ee geesinimada leh ay ku dhiiran karaan inay aadaan. Tan ugu gaarka ah, Aragtida yurubiyanku waxay sugeysaa kuwa raadiya kuwa aan caadiga ahayn, meelaha ka baxsan-garaacista, oo dadka ka fog.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta fasaxaaga 10 aragtida ugu quruxda badan ee Yurub tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada barta "10 Fikradaha ugu quruxda badan Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-viewpoints-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / fr ama / luqadaha de iyo ka badan.
Muuqaallada Beuatiful Daawashada Neefsashada ah YurubByTrain tareen safarka SafarkaTrain aragtiyaha
5 Sababaha Si Baadh Europe By tareenka In December
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe